နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဆိုပြီး မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အစ်ကိုအရင်းတို့မှ သူတို့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း စွန့်လွှတ်ခံလိုက်ရသူ | BurmeseAsia
Home News နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဆိုပြီး မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အစ်ကိုအရင်းတို့မှ သူတို့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း စွန့်လွှတ်ခံလိုက်ရသူ
နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဆိုပြီး မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အစ်ကိုအရင်းတို့မှ သူတို့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း စွန့်လွှတ်ခံလိုက်ရသူ
ကျွန်တော်သည်ကနီသားမိဘနှစ်ပါးမှ ကနီမြို့တွင် မွေ.းဖွာ.းကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ယခုအထိနိုင်ငံရေးနှင့်လူမှု့ကူညီရေးကိုသာတတ်စွမ်းသရွေ့ကနီမှာပင်ပြုလုပ်လာခဲ့ရာ ကျွန်တော်၏မိခင်နှင့်အစ်ကိုမှာနှစ်သက်မှု့မရှိခဲ့သဖြင့် ပြဿနာများစွာ ကြုံခဲ့ရပြီးအိမ်မှာနေထိုင်မှု့မရှိခဲ့သည်မှာများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
(ဖခင်မှာဆုံ.းပ.ါးပြီးဖြစ်သည်) ယခုနွေဦးတော်လှန်ရေးကာလတွင်လည်းတတ်စွမ်းသရွေ့ပါဝင်ခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော်အားပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရန် အမျိုးမျိုးတ.ားမြ.စ်ခဲ့သော်လည်းမရသဖြင့်ယနေ့တွင် ကျွန်တော်၏ မိခင်နှင့်အစ်ကိုတို့မှ“
ကျြန်တော်သည္ကနီသားမိဘနွစ္ပါးမွ ကနီမြို့တြင် မြေ.းဖြာ.းကြီျးပင်းခဲ့သျူဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွ စတင်၍ ယခုအထိနိုင်ငံရေးနွင့်လူမှု့ကူညီရေးကိုသာတတ္စြမ်းသေရြ့ကနီမွာပင်ျပုလုပ္လာခဲ့ရာ ကျြန်တော်၏မိခင္နွင့်အစ္ကိုမွာနွစ်သက္မှု့မရွိခဲ့သျဖင့်ျပဿနာမ်ားစြာ ကြုံခဲ့ရပြီးအိမ္မွာနေထိုင္မှု့မရွိခဲ့သည္မွာမ်ားစြာကြာခဲ့ပျြီဖစ်သည်။ (ဖခင္မွာဆုံ.းပ.ါးပြီျးဖစ်သည်) ယခုနြေဦးတ္လေွာန်ရေးကာလတြင္လည်းတတ္စြမ်းသေရြ့ပါဝင္ခဲ့သျဖင့် ကျြန်တော်အားပါဝင္လုပ်ဆောင်ျခင်းမျပုရန် အမ်ိုးမ်ိုးတ.ာျးမ.စ္ခဲ့သ္လောည်းမရသျဖင့်ယေန့တြင် ကျြန်တော်၏ မိခင္နွင့်အစ္ကိုတို့မွ“
သားသမီးအျဖစ္မွ၊ ညီအျဖစ္မွစြ.န့်လြ.တ်ကြောင်း၊ အိမ္နွင့်လုံးဝမပက်သက်တော့ကြောင်း” ဖုန်းဆက္လာသည်။ ကျြန်တော် ကြည်ျဖူစြာလက္ခံလိုက်သည်။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကိုဆက်လွေ်ာက္လွမ်းတဲ့နေရာမွာ ဘဝသံသရာတစ်ကြေ့မွဘယ်နွောင်ကြိုးကိုမွ် အေရာင္မဆို.းလိုပါ။
ကျြန်တော်အိမ္က မိခင်အစ္ကိုတို့မွစြ.န့်လြ.တ္ပါစေဒါဟာအေရးသိပ္မကြီးဘူျးမန္မာ့နိုင်ငံရေးနက္ခတ္စုံခ်ိန္မွာဒီမိုကေရစီရရွိရေးဟာပိုအေရးကြီးတယ်။
ကျြန်တ္တောို့နိုင်ငံေ. သြျးဖင့်ရေးသောနိုင်ငံတော်ေ. သြးပင္လယ္ထျဲမုပ်မေ်ာမေ်ာမယ့်ဒီမိုကေရစီမျဖစ်ရေးအတြက်အေရးတ္ပောုံ
အောင်သည်အထိအတူတကြရင္ဘတ္တူသူမ်ားနွင့်လက္တြဲလုပ်ဆောင်သြားမည်။ဒီပိုစ့်ကိုတင်ရတာကအမ်ားအသနားခံခ်င်၍ အကူအညီပေးစေလို၍ ရိုးရွင်းစြာမဟုတ်ရပါ။ ဒီလိုကိုယ်ရေးကိုယ္တာကိစ္စေတြကိုမေရးခ်င္ဘဲရေျးပရတာ မ်က္စိနောက်သြားရင်တောင်းပန္ပါရေစဗ်ာ။
စုံစမ်းမေျးမန်ျးခင်းမျပုပါရန်လေးစားစြာမေတ္တာရပ္ခံပါတယ်၊ အေရးတ္ပောုံအောင်ရမည်။ အခ်ိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြေသာ ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေျးဖစ္ပါစေ ကေ်းဇူးလည်းအထူးတင်ရွိပါတယ်နော်။
Previous articleဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေးမှာပါဝင်ကြဖို့ အနုပညာရှင်တချို့ကို ဖုန်းဆက် ဖိအားပေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေး
Next articleဒါရိုက်တာလူမင်း ဖမ်းဆီးခံထားရသော်လည်း အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်အား ဆက်လက်ရိုက်ကူးရန် စီစဉ်